कञ्चनपुर । पर्यटकको आकर्षण बढाउनका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ मा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र भम्केपानीमा थारु संग्रहालयका लागि परम्परागत शैलीको भवन निर्माण गरिएको छ ।
काठ र माटोको प्रयोग गरी नगरपालिकाको वडा कार्यालयले रु. छ लाख बढीको लगानीमा संग्रहालय भवन निर्माण गरेको हो । भवन निर्माणका लागि वडा कार्यालयले रु. दुई लाख र स्थानीय बासिन्दाले रु. चार लाख बढीको श्रमदान गरेका छन् । भवनसँगै पर्यटकीय क्षेत्रमा दुई वटा पक्की शौचालयसमेत निर्माण गरिएको छ ।
अर्को वर्षदेखि पर्यटकका लागि संग्रहालय खुला गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । संग्रहालयमा राख्ने वस्तुको जोरजम्मा गर्नका लागि रु. तीन लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । संग्रहालय क्षेत्रमा वाटर पार्क निर्माण गर्ने, सौर्यबत्तीको व्यवस्था गर्ने र फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्ने ग्राभेल सडकको निर्माण कार्य पूरा गरिएको छ ।
सडकको स्तरोन्नति नहुँदा यहाँ पुग्ने पर्यटकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको थियो । वडाध्यक्ष महराले भन्नुभयो, “पर्यटकीय क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक निर्माणलाई पहिलो वर्षमै प्राथमिकतामा राखेपछि आन्तरिक पर्यटक आवागमनमा निकै वृद्धि भएको छ ।” वर्षमा दुई हजारदेखि तीन हजार ४०० बढीको संख्यामा यस क्षेत्रमा पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । हिउँदमा तातो र गर्मीमा चिसो पानी हुने कुण्ड यस क्षेत्रमा रहेको छ । कुण्डमा रहेको पानी आफैँ माथि उफ्रिने भएकाले यसको नाम भम्केपानी रहन गएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।